Tajaajila Faayinaansii Istisnaa - Oromia International Bank
Tajaajilli faayinaansii kun maamiltoota oomisha Industirii ykn gamoowwan ijaarsi isaanii xumurame bitachuuf gaaffii dhiyeessaniif akkaataa ajaja maamiltichaatiin baankichi oomishiisuun ykn immoo qaamota hojii ijaarsaa irratti bobba’aniin ijaarsisuun maamiltichaaf gurgurtaa harkaa harkaatiin ykn liqaadhaan kan dabarsu yeroo ta’u dhaabbata oomishu ykn ogeessota ijaarsa irratti bobba’an waliin walii galtee uumuudhaan maallaqa dheedhiin faayinaansii gochuu ni danda’a.
Faayidaa fi amala addaa tajaajila kanaa
Yeroo waliigalteen godhamu qabeenyi wal harkaa fuudhamu hin jiraatu.
Garuu oomisha fuula duraatiif baankii fi maamilli waliigaltee uumu.
Bu’uura ajaja maamiltoota bitataniitiin baankichi dhaabbata oomishuu ykn ijaaruu waliin walii galtee hojii addaa uumuudhaan maallaqa dheedhiin ykn bifa leecaalee (inputs) oomishuutiin faayinaansii godha.
Ijineeronni(ogeesonni Maarkeetingii)baankichaa yaada erga itti kennanii booda saffisaan ni ragga’a.
Ifaaf fi saffisaan ragaan qulqullaa’ee murtaa’a.
Tajaajila kanaaf baankiin wabummaa gaafachuu ni danda’a.